I-Jordans Creek Retreat e-Diggers Beach - I-Airbnb
I-Jordans Creek Retreat e-Diggers Beach
Coffs Harbour, New South Wales, i-Australia
U-Phillip Ungumbungazi ovelele
I-Jordans Creek Retreat itholakala endaweni enamaqabunga e-Diggers Beach, uhambo olufushane nje oluya olwandle oluhle kanye nesithonjana esidumile sase-Coffs Harbour, i-Big Banana. Isitudiyo esiseduze sihlanganisa i-en-suite entsha, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye ne-TV ehlakaniphile enokuqukethwe ku-inthanethi. Njengezivakashi zethu, ungajabulela igceke lakho elinelanga futhi uhambe uzungeze izingadi. Imibhede yenkosi eyodwa ingahlanganiswa ukwenza inkosi enkulu ekhululekile. Umbhede omncane ogoqekayo uyatholakala wengane ukuya kobude obumaphakathi.
I-Diggers Beach edumile iwuhambo olulula lwemizuzu engu-7 futhi ingafinyelelwa ngomgwaqo i-Diggers Beach noma ngomnyango wendawo we-Aanuka Beach Resort onezindawo zayo zokudlela zomphakathi, ikhofi kanye nezindawo zokucima ukoma. I-Park Beach Plaza Shopping Centre iwuhambo lwemizuzu emi-2 nje ukusuka eJordans Creek Retreat noma uhambo lwemizuzu engama-20, lapho ungathenga khona zonke izinsuku futhi uthenge igrosa, iziphuzo, ukudla ezitolo ezinkulu noma udle endaweni yokudlela yase-Italy ka-Silvio kuze kube kusihlwa.
Jabulela ukubhukuda, ukuntweza, ukuhamba noma ukuphumula ogwini lolwandle, olugadwa nsuku zonke Ngamaholide Esikole Se-NSW nezimpelaviki ezinyanga zasehlobo. Kunezindlela zokuhamba ezisuka e-Diggers Beach eziya e-Diggers Headland eziya eNyakatho naseMacauley's Headland eziseNingizimu. Kulolu hambo, ungase ubone izimfudu, amahlengethwa nemikhomo (ngenkathi yonyaka) futhi uzojabulela ukubukwa okumangalisayo kwe-Coffs Harbour kanye neziqhingi ezihlukahlukene.
4.99 · 100 okushiwo abanye
I-Diggers Beach iyindawo ethandwayo abantu abangahlala kuyo - inobhishi oluhle, umphakathi omncane, onobungane futhi iseduze nakho konke okunganikezwa yi-Coffs Harbour. I-Diggers Beach inezinkundla zokubuka ezi-2 (maphakathi naseningizimu) lapho ungahlala khona ngokucashile ngaphezu kwezindunduma futhi ubuke amagagasi adlulayo, abantweza nababhukudayo. Emaphethelweni aseningizimu, kunendawo yokudlala yezingane kanye namatafula epikiniki nama-BBQ's. I-Big Banana Fun Park inhle kubo bonke ubudala futhi ijabulisa omama nobaba. Ivula izinsuku eziyi-7 lapho ipaki yamanzi ivaliwe ezinyangeni zasebusika.
My partner, Marlene and I enjoying a great lifestyle in Coffs Harbour. We live just far enough from the beach to live a life with out salt spray and winds whilst enjoying an occas…
Ngesikhathi sokusingatha, sizobe sisendaweni yokuvakasha kwakho futhi sizokwenza yonke imizamo ukuze sibe khona lapho ufika. Uma kungenjalo, sizokuthumela ikhodi yokuvula i-Key Safe ukuze ufinyelele i-Retreat. Sizokwenza isingeniso sethu ngesikhathi esifanele.
Yize ungekho umshini wokuwasha noma umshini wokomisa udonga lukagesi ku-suite, siyakuvumela ukuthi usebenzise umshini wethu wokuwasha nokomisa (uma kudingeka izinsuku zemvula) uma ucelwa.
Ngesikhathi sokusingatha, sizobe sisendaweni yokuvakasha kwakho futhi sizokwenza yonke imizamo ukuze sibe khona lapho ufika. Uma kungenjalo, sizokuthumela ikhodi yokuvula i-Key Saf…
UPhillip Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-5716
Hlola ezinye izinketho ezise- Coffs Harbour namaphethelo